अष्ट्रेलियामा रहँदा भिसा रिजेक्ट भए के अष्ट्रेलिया छोड्नैपर्छ ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
एकपटक अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट भएपछि फेरि आवेदन दिन पाइन्छ कि पाइदैन ? यो धेरैले सोध्ने साझा प्रश्न हो । यसको सहि जवाफ नपाउँदा एकपटक अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट भएकाहरु द्धिविधामा बसेको पाइन्छ । तर एकपटक अष्ट्रेलियाको भिसा रिजेक्ट हुँदैमा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । किनभने अष्ट्रेलियाको माइग्रेसन कानूनले अष्ट्रेलियाको भिसाका लागि पुनः आवेदन दिनसक्ने थुप्रै बाटोहरु प्रदान गरेको छ । प्रकृयागत रुपमा निवेदन दिन सके अस्वीकृत भएका वा रद्द गरिएका सबक्लास अन्तर्गतकै भिसा पाउने प्रवल सम्भावना छ । तर भिसा पाउने नपाउने सम्भावना पूर्ण रुपमा व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ ।